Haftar Oo Joojiyey Shaqaalaha QM In Ay Galaan Liibiya. – Heemaal News Network
Haftar Oo Joojiyey Shaqaalaha QM In Ay Galaan Liibiya.
Ciidamada daacadda u ah Khalifa Haftar ayaa joojiyay duulimaadyada diyaaradaha sida shaqaalaha Qaramada Midoobe ee ku socda iyo kuwa ka baxaya dalka Libya, taasi oo dhaawacaysa dadaallada bani’aadanimo iyo kuwa dhexdhexaadineed ee socday, sida uu sheegay xafiiska howlgalka Qaramada Midoobe ee dalka Libya.
Bayaanka ka soo baxay xafiiska Qaramada Midoobe ayaa lagu sheegay in malayshiyaadka Haftar ee fadhigoodu yahay dhanka bari ee Libya ay dhowr mar oo hore diideen iney u ogolaadaan duulimaadyada diyaaradaha Qaramada Midoobe iney halkaasi ka degaan.
“Kama aanan helin damaanad qaad ammaankeenna ciidamada daacadda u ah Haftar si aan uga degno dhanka waqooyi ee dalka Libya, waana mid socotay ugu yaraan saddexdii todobaad ee la soo dhaafay,” ayuu yiri Jean Alam oo ah afhayeenka howlgalka Qaramada Midoobe ee UNSMIL loo soo gaabiyo. Waxa uu sheegay in taasi ay dhaawacayso duulimaadyada gargaarka iyo kuwa howlgalka Qaramada Midoobe.
Ilo dhanka shaqaalaha gargaarka ah ayaa sheegaya in Haftar uu “aagga duulimaadyada ka caagan” ku soo rogay caasimadda Tripoli ayna jirto walaac ah in diyaaradaha Qaramada Midoobe ay noqdaan kuwa la beegsado haddii ay u safraan caasimadda.
Malayshiyada daacadda u ah Haftar ee la magac baxay LNA ayaa isku dayayay ilaa bishii April ee sanadkii hore iney la wareegaan gacan ku haynta magaalada Tripoli oo ah fadhiga xukuumadda uu caalamku aqoonsan yahay, laakin waxa ay ku fashilmeen howlgalkaasi.
Ergayga Qaramada Midoobe ee Libya Ghassan Salame ayaa dhex dhexaadin ka dhex waday Haftar oo dalalka Imaaratka iyo Masar ay taageeraan iyo Xukuumadda Tripoli oo taageero ka hesha dowladda Turkey.
Qeybta labaad ee wadaxaajoodka nabadeed ayaa loo ballansan yahay in todobaadka danbe uu ka qabsoomo magaalada Geneva. Laakin saraakiil ka tirsan ciidamada bariga Libya ee daacadda u ah Haftar ayaa ku eedeeyey Salame inuu yahay nin kooxdooda ka xaglinaya, laakin eedahaasi waa kuwa ay Qaramada Midoobe beenisay.
Seeraar Oo ka Hadlay Dagaal Ciidamada Jubaland Uu kula Galay Gudaha Kismaayo.